पत्रपत्रिकाबाट – Page2– SidhaRekha
२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार १०:३५२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार १०:३५२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार १०:३५ by Sidharekha Online
कोरियामा अब सीप परीक्षण अनिवार्य
काठमाडौँ । रोजगार अनुमति (ईपीएस) प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरियामा काम गर्न आउनेहरुको अब सीप दक्षता परीक्षण पनि गरिने भएको छ । यसअघि कोरियन भाषा क्षमताका आधारमा मात्रै कामदार छनोट हुँदै आएको थियो । सन् २०१९ देखि ईपीएसअन्तर्गतको कोरियन भाषा परीक्षाको छनोट प्रक्रियामा अंक प्रणाली भनिने नयाँ प्रणाली लागू गर्ने योजना रहेको मानव संशोधन विकास कोरियाले जनाएको छ । अंक प्रणालीको परीक्षा तीन तहमा लिइनेछ । पहिलो चरणमा कोरियन भाषा परीक्षा, दोस्रो चरणमा सीप परीक्षण एवं कार्य दक्षताको मूल्यांकन गरिनेछ । दुवै चरणबाट पाएको अंकलाई जोडेर सबैभन्दा धेरै कुल प्राप्तांक ल्याउनेलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिने छ । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार १०:३०२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार १०:३०२०७५ जेष्ठ १९, शनिबार १०:३० by Sidharekha Online
शैक्षिक पाठ्यक्रममा परिवर्तन, कक्षा ११ र १२ को फ्याकल्टी हट्यो
काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरेको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको संविधान, संघीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाअनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्द्वारा पारित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ अनुसार कक्षा ११ र १२ मा चार विषय अनिवार्य गरिएको छ भने कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाइएको छ । योसँगै अब ११ र १२ कक्षामा संकाय प्रणाली हटाइएको छ । अब ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीले यसअघिको विज्ञान संकायको कुनै एक विषय र मानविकी तथा शिक्षाको अन्य कुनै पनि विषय रोजेर अध्ययन गर्न सक्नेछन् । कक्षा ११ र र१२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयो
२०७५ जेष्ठ १७, बिहीबार १०:०७२०७५ जेष्ठ १७, बिहीबार १०:०७२०७५ जेष्ठ १७, बिहीबार १०:०७ by Sidharekha Online
गाडी हेर्न अनशन !
बैतडी । तीन दिन भयो ७८ वर्षीय हरीजीत सिंह टेर आमरण अनशनमा छन् । मास्तिर खेतका कान्ला छन् । गरामा उनी प्लास्टिकको ओतमा अनशन बसेका छन् । अनशन किन ? उनको उत्तर छ– ‘सडकमा गाडी गुडेको देख्न पाऊँ !’ जीवनको उत्तरार्धमा उनको धोको आफ्नै गाउँमा पिच सडक, त्यसमाथि गाउँलेले सुविधा उपभोग गर्र्दै चढेको मोटर देख्ने रहर छ । उनी सोमबारदेखि सरकारसँग सडक सुविधाको माग गर्दै अनशन बसेका छन् । यो खबर सीपी लोहियाले आजको राजधानी दैनिकमा लेखेका छन् । मंगलबार सरकारले बजेट ल्यायो तर उनको गाउँमा मोटर पुग्ने घोषणा गरेन । दशरथचन्द नगरपालिका–१ का सिंह भन्छन्, ‘सडकको सर्भे भयो तर मोटर गुड्ने चाँजोपाँजो मिलेन । सरकारले देख्छ कि भनेर अनशन बसेको हुँ ।’ यस वडाको गुरु खोलादेखि खालसम्मको सडक सिंहलाई चाहिएको छ । सडकका लागि विनियोजन भएको रकम पनि अन्यत्रै खर्च गर्न लागिएको उनले सुने । थप्छन्, ‘त्यसपछि थामिन सकिनँ । विका
२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार ०९:१०२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार ०९:१०२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार ०९:१० by Sidharekha Online
प्रदेश राजधानीमा बढदै सवारी चाप
धनगढी । धनगढीलाई प्रदेशको राजधानी तोकेपछि मुख्य बजारमा सवारीको चाप अत्यधीक बढेको छ। ट्राफिक चौराह देखि क्याम्पस चोकसम्मको धनगढी बजार क्षेत्र झण्डै झण्डै डेढ किलोमिटर लामो छ। १२ देखि १५ किलो मिटर मात्रै चौडा भएको सडकले बढ्दो सवारी चाप धान्न गाह्रो भई रहेको हो। म्ख्य बजार क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संसद सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कृषि सहकारी तथा भुमीसुधार मन्त्रालय स्थापना भएपछि सवारी चाप बढेको हो। यो खबर कैलाश जोशीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । अझ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, आवाश, बन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्रीहरुका आवास पनि मुख्य बजारकै चार÷पाँच सय मिटरको दुरीमा भएकाले पनि त्यहाँ आउने जाने बेला बजारमा जाम नै हुने गरेको छ। ‘धनगढीको मुख्य बजारमै कर्णाली रिभर साईडको
२०७५ जेष्ठ ६, आईतवार ०८:५८२०७५ जेष्ठ ६, आईतवार ०८:५८२०७५ जेष्ठ ६, आईतवार ०८:५८ by Sidharekha Online
सजिला नेता खोज्दै ओली–प्रचण्ड, विगतका मर्यादा हेरफेर हुने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नेताहरुका विगतका पार्टी मर्यादा हेरफेर हुने भएको छ । एकीकृत पार्टीमा नयाँ भूमिका र वरीयताक्रम तय हुँदै गर्दा कतिपय नेतालाई विगतमा भन्दा बढी प्रभावशाली स्थान मिल्नेछ भने कतिपय नेता भूमिकाका हिसाबले थप खुम्चिनुपर्नेछ । पार्टी घोषणाकै दिन गठित नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमा निर्धारित मर्यादा र तोकिएका जिम्मेवारीले त्यसको संकेत गरेको छ । सचिवालयमा निर्धारित मयाृदाक्रम र जिम्मेवारीका कारण दुवै तत्कालीन पार्टीभित्र असन्तुष्टि छन् । तर पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको निर्णयविरुद्ध कसैले आवाज मुखरित गर्न सकेका छैनन् । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
२०७५ जेष्ठ ६, आईतवार ०८:४७२०७५ जेष्ठ ६, आईतवार ०८:४७२०७५ जेष्ठ ६, आईतवार ०८:४७ by Sidharekha Online
सामाजिक सञ्जाल नचलाउन उद्योग मन्त्रालयद्वारा परिपत्र
काठमाण्डौ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतका सबै निकायमा कार्यालय समय अवधिभर सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाइने भएको छ । आइतबार मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई कार्यालय अवधिभर फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल नचलाउन कर्मचारीलाई मन्त्रीको निर्देशनसहितको पत्र पठाउन लागिएको छ । मन्त्रालयमातहतका निकायमा गरेको छड्के अनुगमनमा कर्मचारीहरु फेसबुक चलाएर बस्ने र रेस्लिङ हेरेर बस्ने फेला परेका थिए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
२०७५ बैशाख १९, बुधबार ०७:२८२०७५ बैशाख १९, बुधबार ०७:२८२०७५ बैशाख १९, बुधबार ०७:२८ by Sidharekha Online
मोदीको स्वागतमा ५० हजार मान्छे उतार्न सर्कुलर
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतमा जनकपुरमा भव्य तयारी भइरहेको छ । मोदीको सम्बोधन गर्ने सभामा ५० हजार मान्छे उतार्न प्रदेश सरकारले आठ जिल्लामा सर्कुलरसमेत गरेको छ । मोदी यही वैशाख २८ गते पटनाबाट सीधै जनकपुर आउनेछन् । त्यसपछि काठमाडौं हुँदै मुस्ताङ जाने तयारी छ । बाह्रबिघा मैदानमा मोदी सवार हेलिकोप्टर अवतरण गर्ने छ । मोदीको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि जनकपुरमा पाँच घेरामा सात हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने छ । यसबाहेक सुरक्षा अवस्था बुझ्न भारतीय सुरक्षाकर्मी सोमबार नै जनकपुर आइसकेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताएका छन् । मोदीको नेपाल भ्रमण नाकाबन्दीदेखि बिग्रेको सम्बन्ध पुनस्थापित गर्न लक्षित गर्ने दिल्लीको तयारी छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
२०७५ बैशाख १९, बुधबार ०७:१६२०७५ बैशाख १९, बुधबार ०७:१६२०७५ बैशाख १९, बुधबार ०७:१६ by Sidharekha Online
सार्वजनिक यातायातकाे विकल्प खाेज्दै सरकार
काठमाडौं । सिन्डिकेट तोड्न र करको दायरामा ल्याउन यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको निर्देशिकाविरुद्ध व्यवसायीले विरोध गरेपछि विकल्पको तयारी थालिएको छ। यातायात व्यवसायीले सवारी ठप्प पार्ने सम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि विभागले वैकल्पिक सवारी साधन प्रयोगमा ल्याइने तयारी थालेको हो। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नभएको खण्डमा विभागले अन्य निकायका सवारी सञ्चालन गरेर भए पनि निर्देशिका कार्यान्वयन गरेर छाड्ने जनाएको छ। त्यसका लागि विभागले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्याव्सन एनप्याव्सन लगायतका निकायसँग भएका सवरी सञ्चालन गर्न सकिने गरी छलफल अघि बढाएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
२०७५ बैशाख १२, बुधबार ०७:१४२०७५ बैशाख १२, बुधबार ०७:१४२०७५ बैशाख १२, बुधबार ०७:१४ by Sidharekha Online
काठमाडौं । संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन आगामी २३ वैशाखबाट सुरु गर्ने गरी संसद्ले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । १५ जेठमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसअघिका कार्यसूचीलाई ध्यान दिँदै संसद् सचिवालयले वर्षे अधिवेशन आह्वानको समय तोकेको हो । सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि प्रिबजेटमाथि छलफल तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । सोही कार्यसूचीलाई ध्यान दिँदै संसद् सचिवालयले २३ वैशाखबाट संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी पूरा गरेको महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । २४ देखि २६ वैशाखसम्म तीन दिन प्रि–बजेटमाथि छलफल गर्ने क्यालेन्डर सचिवालयले बनाएको छ । त्यस्तै, १ जेठभित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्ने गरी सचिवालयले क्यालेन्डर तयार पारेको महासचिव भट्टराईले बताए । ‘सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअ
२०७५ बैशाख १२, बुधबार ०७:०२२०७५ बैशाख १२, बुधबार ०७:०२२०७५ बैशाख १२, बुधबार ०७:०२ by Sidharekha Online
काठमाडौँ । वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भए पनि सरकार र नागरिकले यसबाट पाठ सिक्न सकेका छैनन् । भूकम्पले ढल्किएका घरबाट त्रसित तीन हजार पाँच सय ३८ जनाले आफ्नै घर भत्काइदिन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए । तर, ती निवेदन कहाँ छन् ? काठमाडौंका सहायक प्रजिअ ललित बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘त्यस्ता उजुरी यहाँ पेश भएका छन् र ?’ काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ एकनारायण अर्यालले घर भत्काउन आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको बताएका थिए । तर, गृहको विपत् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदार न्यौपाने घर भत्काउने उपकरण चाहियो भनेर प्रस्ताव पेश भएकोबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताउँछन् । उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले भने, ‘जोखिमयुक्त घर भत्काउन आधुनिक उपकरण हामीले माग गरेका हौँ । पछि त्यस्तै माग महानगरपाल